काठमाडाैं उपत्यकामा मात्रै २ सय ३९ संक्रमित, कुन ठाँउमा कति ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/काठमाडाैं उपत्यकामा मात्रै २ सय ३९ संक्रमित, कुन ठाँउमा कति ?
काठमाडाैं उपत्यकामा मात्रै २ सय ३९ संक्रमित, कुन ठाँउमा कति ?
काठमाडौँ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कन्ट्रोल रुम सोमबार बिहान निकै व्यस्त थियो । एउटा कोठामा देशभरका संक्रमितको विवरण बटुलिंदै थियो भने अर्कोमा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकालाई सम्पर्क गरेर विवरण टिपिँदै थियो । संक्रमितको ट्रेसिङ गरिरहेका दुई जना निकै तनावमा देखिन्थे । काठमाडौं उपत्यकामा आइतबार ३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
तीजमा माइत आएकी छोरीले आफ्नै बहिनीको चार वर्षको छोराको ज्या’न लिइन्
श्रीमानकै साथीसंग पो’ईला गएकी श्रीमतीले यसाे भनेपछि…
कोरोनाबाट आमा गुमाएको शिशुलाई दिनेश खतिवडाले गरे ५१ हजार सहयोग
काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका लागि पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य